ကင်ဆာ – My Doctor
You are here:Home-All Articles-အထွေထွေရောဂါများ-ကင်ဆာ
By tayzar|2018-11-05T17:13:23+00:00November 5th, 2018|Categories: All Articles, ကင်ဆာ, မျိုးဆက်ပွါးကျန်းမာရေး|
အမျိုးသားလိင်​တံကင်​ဆာ​ရောဂါ အမျိုးသားလိင်​တံကင်​ဆာ​ရောဂါ ဟာ အမျိုးသားလိင်​တံအ​ရေပြား(သို့) လိင်​တံအထဲမှာ ဖြစ်​တတ်​တဲ့ အဖြစ်​နည်းတဲ့ ကင်​ဆာ​ရောဂါ တစ်​မျိုးပဲဖြစ်​ပါတယ်​။ ထိခိုက်​တဲ့ cell အမျိုးအစား​ပေါ် မူတည်​ပြီး​တော့ လိင်​တံ ကင်​ဆာအမျိုးအစား အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်​။ ​တွေ့ရများတဲ့ လိင်​တံကင်​ဆာ အမျိုးအစား​တွေက​တော့ - Squamous cell penile cancer - Carcinoma in situ (CIS) -Adenocarcinoma -Melanoma of the penis တို့ပဲဖြစ်​ပါတယ်​။ လိင်​တံကင်​ဆာဖြစ်​သူ​တွေရဲ့ ၉၀%ဟာ Squamous cell penile cancer ဖြစ်​ပြီး​တော့ လိင်​တံကိုဖုံးအုပ်​တဲ့ ဆဲလ်​​တွေက​နေ စတင်​ဖြစ်​ပွားတာ ဖြစ်​ပါတယ်​။ လိင်​တံကင်​ဆာဖြစ်​ရတဲ့ အ​ကြောင်းအရင်းက​တော့
By tayzar|2018-10-20T10:19:49+00:00October 20th, 2018|Categories: All Articles, ကင်ဆာ, အထွေထွေရောဂါများ|
အမျိုးသား ရင်သားကင်ဆာ ရင်သားကင်ဆာလို့ ကြားလိုက်သည်နှင့် လူတော်တော်များများ မသိမရှိဟု ဆိုရလောက်အောင်ပင် ရင်သားကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုမှာ များပြားလာနေသည် ။ အမျိုးသမီးတွေမှာ ဖြစ်တတ်ပါကွာ ငါတို့ယောက်ျားတွေနဲ့ မဆိုင်ပါဘူး ဟု အများစု ထင်နေကြသော်လည်း ရင်သားကင်ဆာဟာ အမျိုးသားတွေမှာ ဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ် ။ အမျိုးသားများမှာ အမျိုးသမီးများကဲ့သို့ ရင်သားမရှိသော်လည်း ရင်သားတစ်ရှူးဆဲလ်များ အနည်းငယ်ရှိနေပါတယ် ။ ကြီးဖော်မဝင်ခင်အထိ ယောက်ျားရော မိန်းမပါ ရင်သားရှိနေမှုဟာ တူတူပဲဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်း အမျိုးသမီးတွေမှာသာ ဖွံဖြိုးမှု ဖြစ်လာပါတယ် ။ ဒါကြောင့်လဲ ယောက်ျားတွေဟာ မိန်းမတွေလို ရင်သားကင်ဆာဖြစ်နိုင်ပြီး အမျိုးသမီးရင်သားကင်ဆာနဲ့ တူတူပဲဖြစ်ပါတယ် ။အရင်က အမျိုးသားရင်သားကင်ဆာဟာ အမျိုးသမီးရင်သားကင်ဆာထက် ပိုဆိုးတယ်လို့ ထင်မြင်ယူဆခဲ့ပေမယ့်
By tayzar|2018-10-16T13:31:01+00:00October 16th, 2018|Categories: All Articles, ကင်ဆာ, အထွေထွေရောဂါများ|
ပရောစတိတ် ကင်ဆာ ဆီးကျိတ်​ကင်​ဆာ​ရောဂါဟာ အမျိုးသားများတွင်​ အဖြစ်​အများဆုံး ကင်​ဆာ​ရောဂါထဲက တစ်​ခုဖြစ်​ပါတယ်​။ ဆီးကျိတ်​ကင်​ဆာဟာ များ​သောအားဖြင့်​ နာကျင်​မှုနဲ့ ​ရောဂါလက္ခဏာ​များ မပြတတ်​တာ​ကြောင့်​ ​ရောဂါအစဦးပိုင်းမှာ သိနိုင်​ဖို့ ခဲယဉ်းပါတယ်​။ ဒါ​ပေမဲ့ တစ်​ချို့​သော ဆီးကျိတ်​ကင်​ဆာ​ဝေဒနာရှင်​​တွေမှာ ​အောက်​ပါ​ရောဂါလက္ခဏာများ ပြသနိုင်​ပါတယ်​။ ✏ ဆီးသွားချိန်​စိတ်​ မကြာခဏဖြစ်​ခြင်း ✏ ဆီးမ​အောင့်​နိုင်​ခြင်း ✏ ဆီးစသွားရန်​ ခက်​ခဲခြင်း ✏ ဆီး​ကောင်း​ကောင်းမသွားခြင်း၊ တစက်​စက်​ကျခြင်း ✏ ဆီးသွားစဉ်​ နာကျင်​ခြင်း ✏ လိင်​တံ မ​ထောင်​မတ်​နိုင်​ခြင်း ✏ သုတ်​လွှတ်​စဉ်​ နာကျင်​ခြင်း ✏ ဆီး (သို့) သုတ်​ရည်​ထဲတွင်​ ​သွေးပါခြင်း ✏ ခါး​အောက်​ပိုင်း၊ ​ပေါင်​နှင့်​
By tayzar|2018-10-12T15:36:46+00:00October 12th, 2018|Categories: All Articles, ကင်ဆာ, အထွေထွေရောဂါများ|
အမျိုးသားတို့အတွက် အိပ်မက်ဆိုး ( သို့မဟုတ် ) ဝှေးစေ့ကင်ဆာ ဝှေးစေ့ကင်ဆာ ဆိုသည်မှာ အမျိုးသားများ၏ ကပ်ပယ်အိတ်အတွင်းရှိ ဝှေးစေ့ တစ်လုံး သို့မဟုတ် နှစ်လုံး လုံးတွင် ကင်ဆာဖြစ်ခြင်းကို ဆိုလိုပါတယ် ။ အထူးသဖြင့် အသက် ၂၀ ကနေ ၃၅ အတွင်းရှိ အမျိုးသားများတွင် ဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ် ။ ဘာကြောင့်ဖြစ်ရသလဲ ? တိတိပပ အနေနဲ့ မရှိသောလည်း မွေးရာပါ မူမမှန်အခြေအနေများ ( ဥပမာ ဝှေးစေ့သည် ကပ္ပယ်အိတ်အတွင်းမဆင်းဘဲ ဗိုက်အတွင်းရှိနေခြင်း ) ၊ မျိုးရိုးထဲတွင် ဝှေးစေ့ကင်ဆာဖြစ်ဖူးခြင်း ၊ လူဖြူဖြစ်ခြင်း အစရှိသည့် အချက်များက ဝှေးစေ့ကင်ဆာ
By tayzar|2018-09-10T11:07:21+00:00September 10th, 2018|Categories: All Articles, ကင်ဆာ, အထွေထွေရောဂါများ|
အစာအိမ်ကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်သောအကြောင်းအရာများ အစာအိမ်ကင်ဆာရောဂါသည် အဖြစ်များသောကင်ဆာရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ တစ်ကမ္ဘာလုံးအနေဖြင့်ကြည့်လျှင် ကင်ဆာရောဂာများထဲတွင် ပဉ္စမမြောက်အဖြစ်အများဆုံးဖြစ်ပြီး ကင်ဆာရောဂါဖြင့်သေဆုံးမှုတွင် တတိယနေရာတွင်ရှိသည်။ အစာအိမ်ကင်ဆာသည် မျိုးရိုးလိုက်တတ်သလို အခြားသောအကြောင်းအရာများကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ဖြစ်စေနိုင်သောအကြောင်းအရာများမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။ - ငယ်ရွယ်ချိန်တွင်ဖြစ်ခဲ၍ အသက်၅၀ကျော်တွင်အဖြစ်များသည်။ - ယောကျာ်းများတွင်ပိုအဖြစ်များသည်။ - ကျောက်မီးသွေးတွင်း၊သတ္တုနှင့် ရာဘာစက်ရုံအလုပ်သမားများတွင်လည်းဖြစ်နိုင်သည် -ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း - အစာအိမ်ခွဲစိတ်မှုခံယူဖူးခြင်း - 'A'သွေးပိုင်ရှင်များတွင်ပိုအဖြစ်များသည် - ငါးဆားနယ်၊အသားဆားနယ်စသော ငန်သောအစားအစာများ၊ ကျပ်တိုက်ထားသောအစားအစာများ၊ ဆားရည်စိမ်အသီးအရွက်များ စားသုံးခြင်း - ဓာတ်ရောင်ခြည်ထိတွေ့မှုရှိခြင်း - (pernicious anaemia) ဟုခေါ်သော သွေးအားနည်းရောဂါကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်သည်။ ထိုရောဂါသည် ဗီတာမင် B12 ချို့တဲ့မှုကြောင့်ဖြစ်သည်။ Vit B12 ချို့တဲ့မှုဖြစ်စေနိုင်သောအကြောင်းအရာများမှာ (၁)မိမိကိုယ်ခံအားစနစ်မှ ကိုယ်ပိုင်ဆဲလ်များအားပြန်တိုက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သော
By tayzar|2018-07-24T11:14:31+00:00July 24th, 2018|Categories: All Articles, ကင်ဆာ, အထွေထွေရောဂါများ|
အစာအိမ်ကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်သောအကြောင်းအရာများ အစာအိမ်ကင်ဆာရောဂါသည် အဖြစ်များသောကင်ဆာရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ တစ်ကမ္ဘာလုံးအနေဖြင့်ကြည့်လျှင် ကင်ဆာရောဂာများထဲတွင် ပဉ္စမမြောက်အဖြစ်အများဆုံးဖြစ်ပြီး ကင်ဆာရောဂါဖြင့်သေဆုံးမှုတွင် တတိယနေရာတွင်ရှိသည်။ အစာအိမ်ကင်ဆာသည် မျိုးရိုးလိုက်တတ်သလို အခြားသောအကြောင်းအရာများကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ဖြစ်စေနိုင်သောအကြောင်းအရာများမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။ - ငယ်ရွယ်ချိန်တွင်ဖြစ်ခဲ၍ အသက်၅၀ကျော်တွင်အဖြစ်များသည်။ - ယောကျာ်းများတွင်ပိုအဖြစ်များသည်။ - ကျောက်မီးသွေးတွင်း၊သတ္တုနှင့် ရာဘာစက်ရုံအလုပ်သမားများတွင်လည်းဖြစ်နိုင်သည်-ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း - အစာအိမ်ခွဲစိတ်မှုခံယူဖူးခြင်း - 'A'သွေးပိုင်ရှင်များတွင်ပိုအဖြစ်များသည် - ငါးဆားနယ်၊အသားဆားနယ်စသော ငန်သောအစားအစာများ၊ ကျပ်တိုက်ထားသောအစားအစာများ၊ ဆားရည်စိမ်အသီးအရွက်များ စားသုံးခြင်း - ဓာတ်ရောင်ခြည်ထိတွေ့မှုရှိခြင်း - (pernicious anaemia) ဟုခေါ်သော သွေးအားနည်းရောဂါကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်သည်။ ထိုရောဂါသည် ဗီတာမင် B12 ချို့တဲ့မှုကြောင့်ဖြစ်သည်။ Vit B12 ချို့တဲ့မှုဖြစ်စေနိုင်သောအကြောင်းအရာများမှာ (၁)မိမိကိုယ်ခံအားစနစ်မှ ကိုယ်ပိုင်ဆဲလ်များအားပြန်တိုက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သော ရောဂာ(
By tayzar|2018-06-22T09:44:10+00:00June 22nd, 2018|Categories: All Articles, ကင်ဆာ, အထွေထွေရောဂါများ|
ကင်ဆာရောဂါ နှင့် မျိုးရိုးလိုက်ခြင်း မျိုးရိုးလိုက်တဲ့ရောဂါဆိုတာနဲ့ အများစုက ဆီးချိုရောဂါ၊ သွေးတိုးရောဂါတွေကို အရင်မြင်တတ်ပါတယ်။ ကင်ဆာရောဂါအချို့ကလည်း မျိုးရိုးလိုက်တတ်ပါတယ်။ ရောဂါမျိုးရိုးရှိတာ တစ်ခုတည်းနဲ့ ကင်ဆာမဖြစ်နိုင်ပေမယ့် အမျိုး(သို့) မိသားစုမှာ ဖြစ်ဖူးရင် အခြားမိသားစုဝင်တွေပါ ဖြစ်နိုင်ခြေများတဲ့ ကင်ဆာတွေရှိပါတယ်။ ကင်ဆာဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းအရာများစွာထဲကမှ မျိုးရိုးလိုက်တာလည်း တစ်ခုအပါအဝင်ဆိုတာ သတိပြုရမှာပါ။ ကင်ဆာရောဂါတိုင်းကတော့ မျိုးရိုးမလိုက် တတ်ပါဘူး။ မျိုးရိုးလိုက်တဲ့ကင်ဆာဖြစ်နေရင်တောင် တခြား risk factorတွေနဲ့ ပေါင်းပြီးမှ ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မျိုးရိုးလိုက်တယ်လို့ အပြောများတာကတော့ ရင်သားကင်ဆာ၊ သားဥအိမ်ကင်ဆာ၊ အူမကြီးကင်ဆာ၊ ဆီးကြိတ်ကင်ဆာတို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ရင်သားကင်ဆာရောဂါခံစားရသူ အယောက် 100မှာ 5ယောက်ကနေ 10 ယောက်အထိဟာ မျိူရိုးလိုက်တာကြောင့်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ BRCA1နဲ့
By tayzar|2018-06-15T16:25:14+00:00June 15th, 2018|Categories: All Articles, ကင်ဆာ, အထွေထွေရောဂါများ|
ရင်သားကင်ဆာ ဟော်မုန်းဆေးများအသုံးပြုကုသခြင်း ဆရာရှင့်။ ကျွန်မအမည် ဒေါ်ဝေေ၀ပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့သုံးနှစ်က ရင်သားကင်ဆာရောဂါကုသခံရ ပြီး လက်ရှိ Tamoxifen ခေါ်တဲ့ ဟော်မုန်းဆေးကို ငါးနှစ်သောက်နေရပါတယ်ဆရာ။ အခုဆို အဲဒီဆေးသောက်နေတာ နှစ်နှစ်ကျော်လာပြီပေါ့။ ကျွန်မရဲ့မိတ်ဆွေအမျိုးသမီးတစ်ယောက် လည်း လွန်ခဲ့တဲ့ငါးလလောက်က ရင်သားကင်ဆာဖြစ်လို့ ခွဲစိတ်ဖြတ်တောက်ပြီး ကင်ဆာဆေး သွင်းခဲ့ရပါတယ်။ သူ့ကိုပေးတဲ့ဟော်မုန်းဆေးကျတော့ Tamoxifen မဟုတ်တော့ဘူးဆရာ။ Letrozole အမည်ရတဲ့ ဟော်မုန်းဆေးတစ်မျိုးဖြစ်နေပါတယ်။ ကျွန်မသိချင်တာက အဲ့ဒီဆေး ကပိုကောင်းလာဆရာ။ ပြောင်းသောက်ဖို့လိုအပ်ပါသလား။ သောက်မယ်ဆိုရင်လည်း ဘယ် လောက်ကြာကြာသောက်ရမလဲ ရှင်းပြပေးစေချင်ပါတယ်ရှင့်။ ဖြေ။ အရင်ဆုံး ဟော်မုန်းဆေးများကို ဘာအကြောင်းနဲ့ ကင်ဆာရောဂါများမှာ သုံးနောကြ သလဲဆိုတာ ရှင်းပြချင်းပါတယ်။ အများသိတဲ့အတိုင်း ဟော်မုန်းဆိုတဲ့ ခနာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ဂ
By tayzar|2018-06-14T08:53:03+00:00June 14th, 2018|Categories: All Articles, ကင်ဆာ, အထွေထွေရောဂါများ|
ဦးနှောက်အကျိတ်၊ ဦးနှောက်ကင်ဆာ ဒီတစ်ခါမှာတော့ ဦးနှောက်ကင်ဆာအကြောင်းရေးသားဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။ ဦးနှောက်ကင်ဆာအကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင် ဦးနှောက်ထဲက အကျိတ်တွေအကြောင်းကို အရင်ပြောရပါတယ်။ ဦးနှောက်အကျိတ်ဆိုတာဟာ ဦးနှောက်ထဲကဆဲလ်တွေ ပုံမမှန်ဘဲကြီးထွားရာကနေ ဖြစ်လာတဲ့ အစိုင်အခဲပါ။ ဦးနှောက်အကျိတ်မှာ ကင်ဆာမဟုတ်တဲ့ရိုးရိုးအကျိတ် (Benign tumour) နဲ့ ကင်ဆာဖြစ်မယ့်အကျိတ် (Cancerous/malignant) ဆိုပြီး ရှိပါတယ်။ နောက်ပြီး ဦးနှောက်အတွင်းမှာပဲ စပြီးဖြစ်ပေါ်တဲ့အကျိတ်ကို Primary Brain Tumour လို့ခေါ်ပြီး တခြားနေရာမှာကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားတာကနေ ပျံ့နှံ့ပြီးဦးနှောက်ထဲရောက်လာတဲ့ အကျိတ်ကင်ဆာကိုတော့ Secondary or Metastatic Brain Tumour လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုလူတွေမှာပိုဖြစ်နိုင်သလဲ? Primary Brain Tumour ရှိတဲ့လူတွေကို ဘာကြောင့်ဖြစ်ရသလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရင်းစမ်းစစ်ရာမှာ အဖြေအတိအကျမရပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဆရာဝန်တွေကတော့ ဘယ်လိုအကြောင်းအချက်တွေဟာ
By tayzar|2018-05-23T16:07:44+00:00May 23rd, 2018|Categories: All Articles, ကင်ဆာ, အထွေထွေရောဂါများ|
ရင်ဘက်ပေါ်က အလုံးကလေး " ဟာ ရင်ဘက်ကိုစမ်းကြည့်လိုက်တာ အလုံးလေးတစ်လုံးတွေ့တယ်" ဒီကိစ္စဟာအမျိုးသမီးတွေအတွက်တော့ ထိတ်လန့်စရာတစ်ခုပါ။ ရင်သားအကျိတ်ဆိုတာ ရိုးရိုးအကျိတ်လည်းရှိသလို ဆန်းဆန်းပြားပြားကင်ဆာအကျိတ်လည်း ဖြစ်နေနိုင်တာကိုး။ ဒါဆို ရိုးရိုးလား ဆန်းဆန်းလား ခွဲခြားဖို့ဆို ဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ ရိုးရိုးရင်သားအကျိတ်လေးအကြောင်း သိထားဖို့လိုမယ်နော်။ စမ်းမိလိုက်တဲ့ အလုံးလေးဟာ အရွယ်အစားအားဖြင့် သိပ်မကြီးဘူး။ ကိုင်ကြည့်လိုက်ရင် သစ်သားကိုကိုင်သလို မာမနေဘူး။ ရော်ဘာလုံးလေးလို အိအိလေးဖြစ်နေမယ်။ ချောချော လုံးလုံးလေးဖြစ်နေမယ်။ ဟိုဘက်ဒီဘက် လက်ညှိုးလက်မနဲ့ ကိုင်လှုပ်ကြည့်ရင် လွယ်လွယ်ကူကူ လှုပ်လို့ရနေမယ်။ ( ဒီလို အကျိတ်လေးတွေဟာ အရမ်းကို ရွေ့လွန်းလို့ Breast Mouse" ရင်သား ကြွက်ကလေး" လို့တောင် တင်စားခေါ်ကြပါတယ်) အလုံးရှိတဲ့ ဘက်